3 seza lamba seza seza
3 seza lamba seza seza, miaraka amin'i Frame momba ny mekanisma marika any Belzika. Tabilao vy mihodina mafy, miaraka amin'ny kidoro amin'ny lohataona: 143*195*12cm. Ny fanokafana ny fandriana amin'ny seza sofa dia mora kokoa ary mora raisina.
Fitaovana fanaka ao an-trano amin'ny ankapobeny 3 seza lamba seza seza, miaraka amin'i Frame momba ny mekanisma marika any Belzika. Tabilao vy mihodina mafy, miaraka amin'ny kidoro amin'ny lohataona: 143*195*12cm. Ny fanokafana ny fandriana amin'ny seza sofa dia mora kokoa ary mora raisina.
Type: Fitaovana sofa any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny; Hotel Suite; Efitra hotely;Fanaka fandriana
Material: Lamba; tongotra vy; hazo mafy&gitara; sombin-javatra,rafitra vy
Toerana niandohana: Guangdong,Shina
Anaran'ny vokatra: sofa fandriana; sofa fatoriana; fandriana mivalona sofa; fandriana seza roa; fandriana sofa zoro
Laharana maodely: #1221
Fitaovana fanaronana: Lamba
asa: Fandriana sofa
lafiny(cm): 184L * 102W * 92H; Habe namboarina
Haben'ny fonosana(cm): 189L * 107W * 97H;
Fotoana famokarana: 30-45andro
Fepetra momba ny varotra: FOB
9~ 12:Ny sosona ivelany miaraka amin'ny tsy tenona.
Q:Inona ny serivisinao aorian'ny fivarotana?
A: Manana iray isaky ny iray izahay taorian'ny fanarahana ny varotra. Raha misy fahasimbana amin'ny resaka fitaterana na kalitao, ho hitanay ny vahaolana ary hanome hevitra anao izahay.
Q:Inona ny MOQ anao?
A:Ny MOQ anay dia 40HQ na 20GP(Mety misy sarany fanampiny), azonao atao ny manafangaro vokatra samihafa hanambarana 40HQ na 20GP.
A: Manana traikefa lehibe amin'ny tetik'asa hotely izahay ary ny fitaovana rehetra dia afaka mandalo ny fanoherana afo toy ny CA117, BS5852, BS7177, BS7176, ary E0 / E1.
Q:Inona no tena asanao amin'ny vokatra?
A: Izahay dia mamokatra Sofas, Sofabed, kidoro, Mpipetraka sy seza.
A: Eny, manana loko marobe isafidianana amin'ny fitaovana hafa toy ny hodi-trondro ambony izahay, PVC, mety, na lamba.
Q:Amin'ny firy izao ny ora fanaterana?
Q:Inona ny fe-potoana fandoavam-bola?
Q:Manana tahiry vokatra ve ianao?
A: Azontsika atao ny mandefa mailaka mivantana anao ny lamba na ny santionan'ny hoditra. Ny vokatra ODM dia tokony hitaky ny sarany santionany, rehefa 10 Ny baiko pcs dia hamerina ny sarany santionany.
Navy Blue Corner Sofera